News & Activities | Century Beverage Co., Ltd
Covid – 19 Donation
အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့်နေရာအသီးသီးတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် သိန်း တစ်ထောင့် သုံးရာ နှစ်ဆယ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်း) ကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ထံ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ CARABAO ENERGY DRINK အချိုရည်မိသားစုသည် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ Fever Clinic များ၊ Quarantine Center များအတွက် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ... Read More
လိုတရ မဟာသိမ်တော်ကြီး နှင့် ဘုရားဆင်းတုတော်များ လှူဒါန်းခြင်း
ငွေကျပ် ၂၄၉၅သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ လိုတရမဟာသိမ်တော်ကြီးနှင့် သစ္စာတိုင်တည် မြတ်စေတီ၊ ဘုရားဆင်းတုတော်များ လှူဒါန်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ် လိုတရဟင်္သသာတ ကျောင်းတိုက် ပရဟိတ ဓမ္မရိပ်သာအတွင်း၌ စုစုပေါင်း ငွေကျပ် ၂၄၉၅သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ သာသနာညွှန့်လှိုင်လှိုင် လိုတရမဟာသိမ်တော် ကြီးနှင့် သစ္စာတိုင်တည် မြတ်စေတီ၊ဘုရားဆင်းတုတော်များအတွက်ရေစက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာကိုဒီဇင်ဘာလ ၂၆ရက်ကကျင်းပခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ အလှူကို မိခင်ကြီး (ဒေါ်အဲစန်း)နှင့်ခင်ပွန်း (ဦးအိုက်ထို(ခ) ဦးတင်ညွန့်)အား ရည်စူး၍ ဖခင်ဦးစောကြာဖူးနှင့်နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထားပြီး ဒေါ်နန်းတင်တင်လှိုင်နှင့်မိသားစုမှ ငွေကျပ် ၂၂၉၅သိန်းကျော် ၊ Central Manufacturing ... Read More
CSR IN MAWLAMYINE
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လအတွင်းတွင် မွန်ပြည်နယ်တွင် မိုးများအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့သဖြင့် မွန်ပြည်နယ်အ တွင်းနေထိုင်သည့် ရေဘေးသင့် ပြည်သူများထံသို့ Century Beverage Co., Ltd ၏ True Friendships Foundation မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်ခရိုင်၊ ကျိုက်မရော မြို့နယ် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ချုပ်သို့ ဆက်သွယ်ပြီး ကျိုက်မရောမြို့နယ် ကွပ်ကဲရေးအ ဖွဲ့ရုံးသို့ ဆန်၊ ... Read More
No. (115), Makhayar Min Thar Gyi Mg Pyo Street, Zone (2), Hlaing Thar Yar Township, Yangon.
09-797 005 461, 09-797 005 462, 09-797 290 003~04
© 2021 Century Beverage Co., Ltd. All Rights Reserved.